Khabiirka Tijaabada ah ayaa qeexaya sida loo xakameynayo xayeysiisyada aan loo baahnayn ee Dhamaan Codsiyada
Xayiraadda xayeysiiska ee sida Adblock Plus ayaa aad ugu caan ah websaydhka iyo bloggers, haddii loo isticmaalo in lagu dilo xayeysiisyada dhibka badan iyo waxyeelaynta ama yareynaya xawaaraha qalabka kombiyuutarka. Mid ka mid ah meelaha daciifka ah waa in kordhinta ay la shaqeeyaan daalacayaasha kaliya marka aanad cusboonaysiisin bilaha ama aysan ka soo saarin ilo sharci ah. Haddii aad rabto inaad xayeysiiso xayeysiisyada laga soo qaado qaar ka mid ah adduunka oo dhan, waxaad si sahlan u habeyn kartaa faylasha martida ee kombiyuutarka oo aad joojin kartaa browserka, iPhone ama codsi kale oo furan xayeysiinta shirkad gaar ah
Igor Gamanenko, oo ah xirfad hogaamiye ka ah Semaat , wuxuu halkan ku sharaxayaa sida nidaamka oo dhan u shaqeeyo
DNS waxaa loo tixraacaa sida buugga taleefanka ee internetka. Kumbuyuutarkaaga ama laptop-kaaga ayaa isticmaali doona laba hab oo kala duwan si loo helo server-ka shabakadda. Markii hore, faylasha martida ayaa la isticmaalay, laakiin hadda faylasha ayaa noqday mid aad u adag sababtoo ah Jaamacadda iyo DARPA waxay martigelineysaa - windows vps 1gbps. Later, DNA waxaa la soo bandhigay iyada oo ujeedadeedu tahay in ay soo celiyaan adeega dhammaan adeegsadaha. Maalmahan, ku dhowaad dhammaan nidaamyada hawlgalka waxay ku sameeyaan raad-raaca magaca IP-ga iyagoo hubinaya faylasha martida. Haddii faylka aan la helin, waxay u diraan weydiimaha DNA
Waqtiga, DNA-da waxay ku noqotay arrin nabadgelyo darro ah internetka. Nooc kasta oo mashiinka ah oo awood u leh inuu wax ka bedelo raadinta magac-----IP-wuxuu nidaamsanaa nidaamkaaga DNS si uu u rumaysto serverada fog iyo SSL adiga oo aan kuu sheegin wax kasta. Badbaadada shahaadada SSL waxay hubisaa in khibradaada ganacsiga ee internetka ee DNA ay tahay mid ammaan ah oo ammaan ah. Haddii aad bedesho ad-adeegahaaga mishiinka maxaliga ah, si fudud ayaad u samayn kartaa hawlo kala duwan oo ku saabsan qalabkaaga, iyada oo aan wax dhibaato ah. Ma waxa aad rabto inaad sameyso? Qaar ka mid ah faa'iidooyinka kale ee nidaamkan ayaa laga wada hadlay hoos.
1. Waxay kicin kartaa internetka sababtoo ah waxay isha ku hayaan feylka martida deegaanka kahor intaan la isticmaalin DNA..
2. Waxay faa'iido u leedahay dhammaan noocyada daalacashada waxayna u shaqeyn kartaa barnaamijyada kala duwan sida RealPlayer, iTunes, Twitter, iyo kuwo kale.
3. Waxay ka shaqayn kartaa heerarka xallinta magaca OS-ga mana laha wax la xiriira taraafikada TCP iyo UDP.
4. Waxay ku tiirsan tahay mashiinka, MS Windows, OSX, iyo Linux. Haddii nidaamka uu isticmaalayo IP (internetka qadka internetka), waxa hubaal ah inuu heysto feylka martida meel
5. Waxay joojin kartaa raadinta adda, iyo feylka martida ayaa ah meel aad u fiican. Haddii aadan rabin inaad la socoto, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad isticmaasho cookies-ka-diidmada.
6. Waxay si sahlan u xakameyn kartaa nacnaca iyo faylasha. Haddii goobta server-ku lagu daro feylka, taasi waxay kordhin doontaa ammaankaaga kombuyuutarka waxayna hubin doontaa khibrada shabakada ee wacan.
Iska ilaali feylka Aqoonsiga ee la abuurayo Dukumiintiyada Bulshada:
Marka hore, waa inaad heshaa faylka martida ee ku yaala meel ka mid ah kombuyuutarkaaga. Hawsha xigta waa in la xakameeyo feylkan iyada oo la abuurayo faylasha la abuuray. Haddii aadan haysan faylka martida, markaa waad guuri kartaa adiga oo aan badalin. Laakiin haddii aad haysato faylka martida, waa inaad sameysid nuqullo nuqul ah si aad u hubiso in macluumaadkaaga aan lumin. Ma jirto baahi loo qabo in la abuuro faylasha martida, adoo ku daraya siyaalo kala duwan adoo isticmaalaya kombuyuutarkaaga si hufan.
Ogeysiiska ugu Dambeeya:
Marka aad horey u xayirtay websayd kasta oo la gelayo feylka martidaada, waa sida bamka nukliyeerka. Laakiin ma jirto wax laga walwalo maadaama aad xakameyn kartid kombuyuutarkaaga oo aad joojiso in aad gashid.